Mpanabe ny mpanakanto, sa…?
Noraran’ny minisiteran’ny kolontsaina sy ny serasera tsy halefa amin’ny haino aman-jery ilay hira “Drako hely”, an’i Rijade. Ny antony, noho ny tononkira heverina fa mandrisika mankany amin’ny fivarotan-tenan’ny tovovavy, ary tsy mifanaraka amin’ny soatoavina malagasy. Mazava loatra fa anisan’ny resaka nahoraka sy nororitina tao anatin’ny tambajotran-tserasera “Facebook” izany, ny faran’ny herinandro lasa teo.
Mizarazara ny fanehoan-kevitra: ao ireo mankasitraka izany sy efa nanao antso avo ny handraisana fepetra mikasika ireo hira sokajina ho “tsy mifanaraka amin’ny soatoavina”. Nisy koa anefa ireo nivoy ny hoe “efa kolontsaina izany”, ka nanakiana ny fandraisana fepetra nataon’ny minisitera.
“Efa kolontsaina izany…”. Eo tokoa no nipetraka ny tena adihevitra, izay azo itarina, araka izay mampety ny tsirairay. Mety hafa tokoa ny tian’ny mpamorona nampitaina, ary hafa ny fandraisana azy. Mety ho tena izao resabe izao mihitsy anefa no tanjona tao anatin’izay koa…
Ny kolontsaina tokoa tsy voatery hitovy, fa miovaova arakaraka ny fianakaviana, ny fiarahamonina, ny foko, ny faritra, sns. Fa misy kosa ireo soatoavina iraisan’ny Malagasy, izay inoana fa tsy anisan’ny fandrisihana mihitsy ny tovovavy hivaro-tena, ohatra…
Ohatra iray tao anatin’ny maro ny hiran’i Rijade. Tsy voatery ny famerenana ny sivana koa anefa ny vahaolana raha hitandro ny soatoavina, ary tsy sivana rahateo no nihatra tamin’ilay hira fa fandrarana tsy alefa amin’ny haino aman-jery ihany (eny, misy mahasamihafa izany).
Marina fa tsy voatery ho mpanabe ny mpanakanto. Tsy votery hananatra, ho fitaratra, ho maodely. Tsy izay no tena asany, saingy noho izy mampita hafatra anatin’ny sanganasany, tokony hijery ihany ny fiantraikany amin’ny fiarahamonina.